သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: အိမ့်ချမ်းမြေ့၏ အဖိုးတန်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများ
ရဲလင်းအောင်ပါ... အခုတော့ သံယောဇဉ်ဖြတ်ပြီး အစ်မက သူယူမယ်ဆိုလို့ ပေးပစ်ပါတော့မယ်..
ရဲလင်းအောင်အောက်က ဗုံးထဲက ဘာတွေထွက်လာလည်း ပြပါဦးမယ်...
ဟုတ်ကဲ့... ကျောင်းတုန်းကတော့ နေ့မအိပ်..ညမအိပ်.. ငိုတဲ့အခါလည်းငိုပြီး.... ရယူလာခဲ့သော အောင်လက်မှတ်များကို သူများတွေမှန်ဘောင်သွင်း..မသွင်းမသိ။ မလေးတော့ ဗုံးတစ်ဗုံးထဲ ပစ်ထည့်ထားတာပါပဲ...။ အကုန်ထွက်လာတယ်.. အချို့ဟာတွေဆို.. ဟဲ့.. ငါဒါရထားတာပါလားဆို မေ့တောင်နေပါတယ်.. ။
ဦးထီးကို ဒီရောက်မှ နှစ်သက်သွားလို့ သူ့စာသားတွေကို မြတ်နိုးလွန်းလို့.. တယုတယရေးထားတာ..
မြန်မာပြည်ကိုလည်း စိတ္တဇ ဆန်ဆန် လွမ်းခဲ့တာတွေကောပေါ့လေ...
ဟိုဘက်မှာ ဆက်ပြီးပြူးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ၀တ္ထုတိုလေးတစ်ပုဒ်ကိုတွေ့ရပါမယ်ရှင့်...
တစ်ကယ်ကို ကိုင်လို့မရပါဘူး.. ကြွေသွားမှာပဲ..
ဒီမှာ ကိုယ့်ဟာကိုယ် မြန်မာလိုဝတ်မယ်ဆိုပြီး သင်လာတာ.. အစ်မတွေဆီက။
ချုပ်တာကတော့ ချုပ်ပါတယ်.... တစ်ထည်မှ မ၀တ်ပါဘူး။ မ၀တ်ဆို.. ၀တ်လို့ မရလို့ပါပဲ...ကဲ။
မနက်ဖြန် ဂျာမဏီပွဲထကြည့်ဖို့တောင် နောက်ကျပြီမို့ အိပ်ပါပြီ..
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 12:51 AM
အမွေတောင်းစရာလည်း ဘာမှမရှိပါလားနော် ......
တစ်ခါတစ်လေ......မအောင့်နိုင်လို့ ကင်(န်)တင်းမှာ ထိုင်ရေးမိတဲ့ စာရွက်အပိုင်းလေးတွေတောင် လွှတ်မပစ်ချင်ဘူး...။
ဘလော့ဂ်ပေါ်ရောက်လို့ သူများတွေဖတ်ပြီးသွားတာတောင်.......သိမ်းသိမ်းထားတုန်းလေ......။ ကြာတော့ အရမ်းအမှိုက်တွေဖောင်းပွလာလို့ မျက်စိမှိတ်ပြီး.......လွှင့်သာပစ်လိုက်ရတယ်.....။
Nice, make me smile to read the post.
Also want to cry, I've leftalot of books every time I moved out.
အိမ့်ချမ်းမြေ့ ဒေါ့ကွန့် မှာပဲ သစ္စာရှိရှိ ကွန်မန့်လာပေမယ့် ဒီနေရာရဲ့ပိုစ့်မှာတော့ ကွန်မန့်မပေးပဲ မနေနိုင်လို့ မန့်ခဲ့ပြီ။
အိမ်ပြောင်းလို့ရတဲ့ stress ကို ကိုယ်ခြင်းစာတယ် မလေးရေ..,
မလေး စုစောင်းထားတဲ့ စာအုပ်တွေ တိုလီမုတ်စတွေ နဲတာမှ မဟုတ်တာပဲ။
ဒါတွေ ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် မလေးလဲ အစွဲအလန်းကြီးတတ်သူ သံယောဇဉ်ကြီးတတ်သူ တယောက်မှန်း ခံစားလို့ရတယ်။
Join the club., မလေး... :)))
ကျွန်တော့်မှာလည်း ကဒ်တွေ..စာတွေ.. သူငယ်တန်းလောက်ကတည်းက ပစ္စည်းလေးတွေရှိတယ်..။ အဖိုးတန်ဆိုတာထက်အမှတ်တရပေါ့... ။ဒါပေမယ့်လည်း သူတို့လည်းချောင်တစ်နေရာမှာ အချိန်တော်တော်များများ ပိုင်ရှင်ရဲ့ အမေ့လျော့ခံထားရတာပဲလေ..။
မလေး က ဗုံးတွေချည်းပဲ။
သတိလဲထားဦး ပေါက်ကွဲနေဦးမယ်နော်။ :D
စကားမစပ် ရှေးဟောင်းပစ္စည်း ဆို ပြီးတော့ ebay မှာ ဖြစ်ဖြစ် amazone မှာ ဖြစ်ဖြစ် ဈေးပြိုင်စံနစ်
နဲ့လေလံတင်ယင် တော့ အလုပ်ဖြစ်မယ်ထင်ပါ့နော်။
အိမ်ပြောင်းနေတယ် ဆိုလို့ ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်။
ပင်ပန်းတယ်ဗျ။ သိမ်းရဆည်းရ ရွေ့ ရနဲ့ ။
စာအုပ်ဗုံးလားဟင် ဒါဆို အန်တရယ် ရှိတာပေ့ါ။
အန်တရယ်မရှိတဲ့ စာအုပ်ပုံးလေးတွေ ကို ရှာလိုက်လေ
M.T diary said...
ထမင်းစားလက်မှတ်က များးး လှချည်လား
သမိုင်းပေးတာဝန်များကိုလည်း ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်နိုင်ပါစေ ဝေးးးးးး
ကိုဏီ.... ကဒ်တွေလား... :D အင်းးးးး
Min ... ကျမလည်း စိတ်ဖြတ်ပြီး ပစ်ပစ်ရမှာပါပဲထင်တယ်..
နန္ဒာ.. အစွဲအလန်းကြီးတာ မကောင်းဘူးကွယ်
ကိုဖြိုး... ပိုင်ရှင်ရဲ့ အမေ့လျော့ခံထားရတာပဲ..ဆိုတာဟုတ်ပါတယ်လေ..
ကိုမောင်မောင်... မနက်ဖြန်ကစ လေလံတင်တော့မယ် :P
ဆောင်းး ...း)) ပျော်စေပျက်စေပါ
နေမင်းကွန်းခိုရာကမ်း၂၂ ... ဒီလိုပါပဲ...
မလေး ပျော်စေပျက်စေ စိတ်လွတ်လက်လွတ်ရေးထားတဲ့ စာလေးကို အချိန်ကုန်ခံဖတ်ရှုမှတ်ချက်ပေးသူများကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်...
အဟီး... မဗေဒါနဲ့ ဗြောင်းပြန်ပဲ... အိမ်ပြောင်းရင် အရင်ဆုံး လွှတ်ပစ်ဖြစ်တာ စာအုပ်တွေပဲ... သိပ်လဲ များများ မရှိပါဘူး... ကျောင်းတုန်းက ဖတ်စာအုပ်တွေများတယ်.. အရင်ကတော့ သယ်သေးတယ်.. နောက်တော့ ပြန်လဲ မဖတ်ဖြစ်တာ သေချာနေတော့ အလေးခံပြီး သယ်ဖြစ်တော့ဘူး.. အဟီး...
စာတွေ ဒီလောက်ဖတ်လို့ စာရေးတာတွေ ဒီလောက်ကောင်းနေတာကိုး....